चीन मा एक प्रमुख स्टेनलेस स्टील सतह डिजाइनर रूपमा, Foshan Hermes (Hengmei) इस्पात कं, लिमिटेड 2006 मा, जो 10 वर्षभन्दा लागि स्टेनलेस स्टील नवीनता र गुणस्तर लागि प्रयासरत स्थापित। हालसम्म हामीले स्टेनलेस स्टील सामाग्री गरेको डिजाइन, प्रशोधन को एक ठूलो एकीकृत उद्यम छ।
अब Hermes (Hengmei) इस्पात देशहरूमा धेरै राम्रो कमाएको।
भारत: हामी अब हामी मुम्बई, चेन्नयाँ र दिल्ली, मा राम्रो प्रतिष्ठा भइरहेको ग्राहकहरु धेरै Hermes गुणस्तर रुचि वर्ष 2010. देखि भारत बजार आपूर्ति थाले।
मध्य पूर्व: हाम्रो व्यावसायिक बिक्री टीम प्रयासमा साथ, अब हामी थप र अधिक ग्राहकहरु सङ्कलन छन्। सबै ग्राहकहरु पहिले नै Hermes स्टील को मित्र भए छ।
सबैभन्दा ठूलो वास् र डिजाइनर सबै दुनिया भर आफ्नो परियोजनाका लागि आदर्श साझेदार रूपमा चयन Hermes इस्पात! हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, एक उज्ज्वल भविष्य हामीलाई पर्छ!
Foshan Hermes (Hengmei) इस्पात कं, लिमिटेड